Unodoli we-AI Tech wobukrelekrele bokwenziwa unodoli wesondo werobhothi ephezulu
Thenga unodoli we-AI-Tech we-Witty Dialogue kwi-intanethi
Unodoli we-AI Tech uye walawula imarike yerobhothi yemihla ngemihla iminyaka emininzi, Thenga i-AI-Tech Robot Oonodoli bothando, uya kusebenzisa ulwazi lwayo lobuchwephesha ukuqonda iphupha elinomtsalane. I-AI Tech ikwaphehlelele irobhothi ethandwayo ngokwesondo ukwenza ixesha labucala labathengi libe mnandi ngakumbi. Unodoli wetekhnoloji ye-AI unenkqubo yokuhlawula apho unodoli wakho uya kusebenzisa ukufunda imihla ngemihla kwaye ahlengahlengise izakhono zakhe ngokusekwe ekusebenzisaneni kwakho. Unokuseta unodoli ngendlela othanda ngayo. Ngenkangeleko yobuso, unodoli wakho uya kuba nobuntu ngakumbi kunangaphambili!
Material: IiRobhothi zeSex Uhlobo: Iirobhothi zesini ze-AI Tech, iirobhothi zesini, ooDoli bezesondo be-AI-TECH, njalo njalo.
Intshayelelo:Usenokuba uvile izinto ezimbalwa malunga neerobhothi ze-humanoid kwaye ucinga ukuba ufuna olu hlobo lommangaliso wezobuchwepheshe onokuthi uthintele i-sexy ebhedini. Iirobhothi zesini ze-AI Tech zigqibelele kuwe. Ukuba awuyiboni irobhothi yakho yetekhnoloji ye-AI oyithandayo kwiwebhusayithi yethu, ke asikayilayishi. Ungakhathazeki, sisenokwenza ngokwezifiso nayiphi na Unodoli wesondo we-AI Tech irobhothi yeyakho! Qhagamshelana nathi ukubonelela ubungakanani kunye nebra yedoli, ukuba kukho ifoto, siyavuya ukuthengisa kuwe ngexabiso lemarike elikhuphisanayo.
Izinto eziluncedo zikaDoli we-AI Tech:
1. Oonodoli bokwabelana ngesondo ngomatshini okrelekrele, ndikuzisele amava esondo angaqhelekanga
2. Thetha nawe, funda kuwe, yongeza ulwimi eluthandweni
3. Unodoli we-AI Tech unobuchwephesha obuvuthiweyo kwaye ubulawula imarike yerobhothi yemihla ngemihla iminyaka emininzi. Isebenzise ulwazi lwayo lobuchwephesha ukuze iqonde iphonografi, edume kakhulu kwishishini loonodoli besini.